Football Khabar » भोटिङमा रोनाल्डो आउट, मेस्सीको गोल उत्कृष्ट घोषित !
भोटिङमा रोनाल्डो आउट, मेस्सीको गोल उत्कृष्ट घोषित !
एजेन्सी, जेठ २१
युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च संस्था युइएफएले सिजन २०१८/१९ अन्तर्गत वर्षभरिका खेलबाट ‘गोल अफ् द टुर्नामेन्ट’ घोषित गरेको छ । जसमा स्पेनिस बार्सिलोनाका कप्तानसमेत रहेका लिओनल मेस्सीले इंग्लिस क्लब लिभरपुलविरुद्ध गरेको गोल परेको छ ।
यसअघि युइएफएको प्राविधिक टिमले सिजनका उत्कृष्ट १० गोल घोषित गरेको थियो । सो सूचीमा भने इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पूर्वक्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध समूह चरणमा गरेको भली गोललाई ‘गोल अफ् द सिजन’ घोषित गरिएको थियो ।
तर, उत्कृष्ट १० गोलको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा परेका मेस्सीको गोललाई फ्यानहरूले भने अनलाइन भोटिङबाट ‘गोल अफ् द टुर्नामेन्ट’ का रूपमा छाने । उत्कृष्ट १० गोलबाट ‘गोल अफ् द टुर्नामेन्ट’ छान्न फ्यानहरूका लागि भोटिङ खुला गरिएको थियो ।
युइएफएको प्राविधिक टिमले ‘सिजनकै उत्कृष्ट गोल’को रूपमा रोनाल्डोको गोललाई घोषणा गरे भने फ्यानहरूले भने रोनाल्डाको गोललाई ‘गोल अफ् द टुर्नामेन्ट’मा छानेनन् ।
भोटिङबाट सेमिफाइनअन्र्तगत बार्सिलोनाको घरमा भएको पहिलो लेगको खेलमा मेस्सीले फ्रि किकबाट गरेको दर्शनीय गोल ‘युसिएल गोल अफ् द टुर्नामेन्ट’ घोषित भएको हो ।
यस सिजन ‘गोल अफ् द सिजन’को अवार्ड जितेका रोनाल्डोले कूल ६ गोल गरेका थिए भने ‘गोल अफ् द टुर्नामेन्ट’ घोषित गोलका गोलकर्ता मेस्सीले कूल १२ गोल गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १४:४६